Ahoana no fikarohana ny fomba amam-panaon'ny mpivarotra amoron-dranomasina ambony indrindra?
Ny olona mivarotra ao amin'io tsena feno olona io dia tokony hahafantatra ny fomba hitadiavana ny vokatra azo avy amin'ny varotra Amazon, tetik'ady, ary koa ny fanaraha-maso ny vidin-tsolika ary mitazona rafitra marevaka hafa miaraka amin'ny fampiasana azo ampiasaina any. Saingy ahoana no ahafahana mahita ny fomba mety tsara sy mamantatra ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny mpifaninana aminao nefa tsy mandany fotoana sy ezaka be loatra? Satria efa be loatra ny zavatra tokony hataonao sy ny zavatra maro hanatsarana ny lisitry ny vokatra sy ny teti-bola. Soa ihany fa tsy misy ny tsy fisian'ny fitaovana sy rindrambaiko an-tserasera mba hitadiavana ny finday fanta-piaramanidina Amazon - manomboka amin'ny famokarana vokatra, ny politikam-bola, ny fandefasana entana, ny fanamarihan'ny mpanjifa, ny fikarohana ny teny fototra, ary koa ny fomba tsara indrindra amin'ny fampiroboroboana vokariny miaraka amin'ny top mpivarotra ecommerce mahomby. Araka ny efa nolazaiko, dia misy maro an'isa amin'ny aterineto samihafa azo aleha amin'ny fidirana mivantana. Saingy eto ambany dia hasehoko anao ny telo amin'ireo fitaovana tsara indrindra ampiasainao. Izaho manokana dia nampiasa ireto safidy manaraka ireto mba hitadiavana ny fahafahan'ireo mpivarotra Amazon - Jungle Scout, AMZ Tracker, ary Scope - ny tsirairay amin'izy ireo dia voaporofo fa mahomby, hany ka ndao jerena fohifohy fohifohy.
Ny fitaovana an-tserasera voalohany hikaroka ny vahaolana momba ny varotra Amazon dia Jungle Scout. Manoro hevitra aho miezaka maka azy mialoha ny zavatra hafa mba hahatakatra avy hatrany ny vokatra tena ilain'ny Amazon, ary inona ny niches no malaza ho an'ny mpivarotra eo. Raha ny marina, ny Jungle Scout dia fantatry ny mpivarotra amperinasa sambany tany Amazona ho fitaovana tsara indrindra ho an'ny fikarohana momba ny vokatra "data-driven". Ity safidy ity dia miteny ho azy, ka mahatonga azy io ho mendrika ny fampiasana na farafaharatsiny ny fanandramanao voalohany. Ireto misy tombontsoa lehibe azo raisina amin'ity fitaovana an-tserasera ity: ny banky angona malalaka ho an'ny metrika goavana indrindra (samy anao, ary ny mpifaninana aminao), dia manampy amin'ny famoahana fahafaha-miafina miafina sy mavesatra ny tambazotra fidiram-bola, niche jäger mba hanomezana tombony anao amin'ny fifaninanana real cutthroat, ary ny endriny maro samihafa mila miezaka ny hitsambikina amin'ny tsena vaovao.
Ity fitaovana ity dia mampiseho ny sisiny matanjaka indrindra rehefa mila mitady ny tenimiafan'ny Amazon avy amin'ny varotra, ampiasaina amin'ny lisitra vokarin'ny vokatra tsara indrindra. Amin'izany fotoana izany, ity fitaovana fikarohana fikarohana ity dia afaka manampy anao amin'ny fomba fijery misimisy kokoa momba ny tena karoka fikarohana sy ny fangatahana fanalahidy lava ampiasain'ireo mpividy mafàna fo amin'ny Amazon indrindra. Fanampin'izany, ny AMZ tracker dia nanangana ny seho SEO mba hampisehoana ny zavatra azo atao amin'ny vokatra fametrahana fanavaozana ho an'ny vokatra ambony indrindra.
Ny ankamaroan'ny fitaovana maoderina teo aloha, ny Scope dia manambatra ny fikarohana fototra amin'ny valin'ny fifaninanana. Anisan'ireo singa hafa, ity mpanampy an-tserasera ity dia tena mahatalanjona tokoa raha ny fanentanana PPC momba ny fananganana, ny fitadiavana ny fahafaha-manararaotra vaovao, ary koa ny fitantanana ny risika mahomby amin'ny fanombatombanana ny tatitra rehetra ilaina mba hahitana sary lehibe momba ny haingam-pivarotana sy ny fandaniana FBA . Manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ity fitaovana ity mba hanangonana ny finday tsara indrindra amin'ny mpanohitra ny tsena - mba hampivelatra ny paikady fivarotana manokana izay tena miasa Source .